Skylight Technological Training Center
Android Application Development with B4A (Paid)
Python Programming Language (Zoom)
ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် အွန်လိုင်းသင်တန်းတွေဟာ မကြုံစဖူး အထူးများပြားလာပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာ လေ့လာသင်ယူစရာ အခွင့်အလမ်းတွေ အရင်ကထက်ပိုများလာသလို အွန်လိုင်းမှာ လေ့လာသင်ယူတဲ့ အလေ့အထလည်း အရင်ကထက် ပိုပြီး ထွန်းကားလာပါတယ်။ ဒီလို အွန်လိုင်းကနေ လေ့လာသင်ယူခြင်းဆိုတာက ကျွန်တော်တို့အတွက် သမားရိုးကျပုံမှန်အသစ် (New Normal) ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီ New Normal နဲ့ အသားကျအောင် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားလာကြရပါတယ်။ ပေးသူကပေးတဲ့အတိုင်း ယူသူက ရဖို့အရာအတွက် အွန်လိုင်းကနေ သင်ယူခြင်းမှာလည်း နည်းစနစ် တကျ လေ့လာသင်ယူပါမှ ထိရောက်တဲ့ လေ့လာသင်ယူခြင်း ဖြစ်လာမှာမို့လို့ ဒီသင်ခန်းစာကို စီစဉ်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းသင်တန်းတက်မှမဟုတ်ဘဲ ပညာရပ်တွေ လေ့လာသင်ယူတဲ့ အခါတိုင်းမှာလည်း လိုက်နာကျင့်ကြံသင့်တဲ့ နည်းလမ်းတွေလည်း ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာသင်ယူရတဲ့ အခါတိုင်း မိမိအတွက် ဖိစီးမှုမဖြစ်စေဘဲ ပညာသင်ယူခြင်းရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ထိထိမိမိရရှိစေအောင် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာကို edX ရဲ့ How to Learn Online ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာကို မှီငြမ်းပြုစုထားပါတယ်။
Teacher: Dr. Nyein Wai
Teacher: Sayar Ngin Kap Thang
နည်းပညာအသုံးပြုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူအများသိချင်နေတာလေးတွေကို ဒီနေရောကနေ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Android Application Development (Free)
Teacher: Zayar Aung
Teacher: Htar Htar Saw Lwin
Teacher: Htetmyet Myo
Android Application Development with Java (Paid)
Python Language ကို Guido van Rossum က ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ စတင်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ Python ရဲ့ ရိုးရှင်းပြီးဖတ်ရလွယ် တဲ့ Syntax ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် Programming ကို အခုမှစပြီး လေ့လာမယ့်သူတေွတောင် အခက်အခဲမရှိ သင်ယူနိုင်မှာပါ။ သင်္ချာဖော်မြူလာတွေကို Python statement ပုံစံပြောင်းရေးကြည့်ရင်းနဲ့ Python က ဘယ်လောက် ဖတ်ရလွယ် သင်ရလွယ်တယ်ဆိုတာ၊ ဘယ်လောက် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဆိုတာ သိလာရမှာပါ။
Python ဟာရိုးရှင်းသလို အစွမ်းလဲထက်တဲ့ language တခုလည်းဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ Open Source language ဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ကွယ်က အားကောင်းတဲ့ Community ကြီးတခုလည်း ရှိနေပါတယ်။ အမျိုးစုံလှတဲ့ Standard Library တွေရှိနေသလို Cross Platform Language လဲဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။
အခုခေတ်စားနေတဲ့ Machine Learning, Artificial Intelligent နဲ့ Robotic Programming တေွမှာလည်း Python က ခိုင်မာတဲ့နေရာတခုကို အပိုင်စားယူထားပါသေးတယ်။ Course ကို လေ့လာပြီးချိန်မှာ Python နဲ့ပတ်သက်ပြီး အတိုင်းအတာတခုအထိ စိတ်ကျေနပ်မှု ရရှိစေပါလိမ့်မယ်။
Teacher: Dr. Thura Kyaw ,Ph.D(CEIT), YTU
Teacher: Aye Thida
Teacher: Thet Zaw Aye U
Teacher: Sabai Oo
C Programming Language ကို Dennis Ritchie က Unix Operating System အတွက် စတင်တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Mother Language လို့လည်းတင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။
C ဟာ Programming ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် C ကိုသာ သိထားမယ်ဆိုရင် C ၏ သဘောတရားကို အသုံးပြုထားတဲ့ တခြား Programming languages တွေကိုလည်း အလွယ်တကူနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
C Language ဟာဆိုရင် ယခုအခါမှာ applications နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုလာတဲ့အတွက်ကြောင့် Industry-Standard Language တစ်ခုအနေဖြင့်လည်းရပ်တည်နေပြန်တယ်။
Programming ကို စတင်လေ့လာမည့်သူတွေအတွက် C Programming ဟာ အလွန်ရိုးရှင်းပြီး နားလည်ရလွယ်ကူသည့်အတွက် စတင်လေ့လာဖို့ကောင်းတဲ့ Language တစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင် article တစ်ခုချင်းစီကို examples နှင့်တကွ အသေးစိတ် သင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်သည့်အတွက် အခက်အခဲမရှိ လွယ်ကူစွာသင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Course တစ်ခုလုံးကို သင်ယူပြီးချိန်မှာ C Programming ရဲ့ Concepts တွေကို ကောင်းစွာနားလည် သဘောပေါက်ပြီး C Programs များကို ကိုယ်တိုင်ရေးသား ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Teacher: Dr. Htoo Maung Maung
Dr. Sithu Aung
M.E. (Robotics and Mechatronics)
Ph.D. (Electrical Complexes and Systems)
Teacher: sithu aung
Engineering Electronics Knowledge
Teacher: Ko Myo
Embedded Systems (Arduino)
Teacher: SawAung NyeinOo
Contours Techniques for Computer Vision
Computer Vision Project များတွင် အသုံးများသော Contour အကြောင်းကို သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သင်ကြားရာတွင် Python Programming Language နှင့် OpenCV Library ကို အဓိကထား အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကြားသွားမည့် Contours သင်ခန်းစာများမှာ
(1) Finding and Drawing Contours
(2) Simple Contour properties
(3) Advanced contour properties
(4) Contour Approximation
(5) Sorting contours တို့ ဖြစ်ပါတယ် ။
လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပြီး လက်တွေ့သင်ခန်းစာများပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ Project တစ်ခုကိုတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Teacher: Phyo Paing Ko
Teacher: MyanmarCV DeveloperTeam
This course provides an introduction to Neural Network and Deep learning, including it's approach to Computer Vision applications.
Deep learning has revolutionized computer vision recently. Recent developments in neural network (aka “deep learning”) approaches have greatly advanced the performance of these state-of-the-art visual recognition systems. Many of these applications are visual recognition tasks such as image classification, localization and detection.
More and more researchers and scientists from Computer Vision industries are adopting Deep Learning techniques and has pushed the limits of what was possible in the visual recognition tasks with traditional Computer Vision techniques. This course isadeep dive into details of the deep learning architectures withafocus on learning end-to-end models for these tasks, particularly image classification.
The structure of the course and many of the background contents are taken from Stanford cs231n course. cs231n is one of the most influential computer vision courses over the recent years, and many other universities and online courses has cited the materials from it. We believe it is beneficial to many of our students and learners to gain access to theoretical and practical approach of the course, and gainadetailed understanding of cutting-edge research in computer vision.
Teacher: Hlaing Min
Teacher: Tun Tun Win
Teacher: Dr. Nang Aye Aye Htwe, Ph.D (IT), MTU
Teacher: Dr. Tin Maung Wynn, Ph.D. (IT), MTU
Kali Linux: Operating System For Hackers & Forensic Investigators
၂၀၁၄ ခုနှစ်က ကွန်တော်တို့ Team MrLinuxer ကနေ ရေးသား ထုတ်ဝေးထားတဲ့ Kali Linux : Operating System For Hackers & Forensic Investigators ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကို အခန်းလိုက် တင်ပေးသွားပါ့မယ်။
ကျွန်တော်တို့ ထုတ်ဝေခဲ့တာဟာ ခုဆို ၆ နှစ်ခန့်ကြာပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် နည်းပညာပြောင်းလဲမှု မြန်ဆန်တဲ့ Information Security Field အတွက် တချို့သော စာအုပ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာများ၊ Tools များအဟာ Out-Of-Date ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယခု စာအုပ်ထက် ပိုမိုပြည့်စုံသော၊ ရှင်းလင်းလွယ်ကူသော၊ Infrastructure level ထိ Handel လုပ်နိုင်အောင် ရည်ရွယ်ပြီး နောက်ထပ် တစ်အုပ်ကိုလည်း ထပ်မံ ပြုစုရေးသားလျှက်ရှိပါတယ်။
ပိုမို ပြည့်စုံတဲ့ Version အနေနဲ့ ထပ်မံ မထွက်လာမီ စပ်ကြားမှာ မပြောင်းလည်းတဲ့ အခြေခံ သတင်းအချက် အလက် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သဘောတရားများကို ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန် အတွက် ယခုကဲ့သို့ တင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရိုး တစ်ခုအနေနဲ့ အသေးစိတ် သင်ပေးမှာ မဟုတ်ပေမဲ့ အခန်းအလိုက် အတွက် ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့ Security Concept များ၊ အသစ် အသစ်သော နည်းပညာရပ်များကိုဖြည့်စွက်ပေးသွားမှာဖြစ်သလို၊ တက်ရောက်သူများအနေနဲ့ သိလိုတဲ့ အကြောင်းအရာများကိုလည်း အခန်းတစ်ခုစီ အောက်မှာ ပြန်လည် ဖြေကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
စာအုပ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ သင်ခန်းစာများကို လိုက်ပါ လုပ်ဆောင်နိင်ရန် အတွက် Kali OS ကို အောက်ပါ လင့်မှာ Download ပြုလုပ်နိင်ပါတယ်။
Kali OS - https://www.kali.org/downloads/
Lab File - [Progressing]
MrLinuxer CTF - [Progressing]
Teacher: Mr. Linuxer
Teacher: Aung Zaw Myo
Internet သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကြီးမားသော ပြောင်းလဲမှုများ၏ အဓိက ကျောရိုးတစ်ခု အဖြစ် ရပ်တည်နေပါသည်။ Internet သည် ကွန်ရက်များ စုပေါင်းထားသော အကြီးမားဆုံးသော ကွန်ရက်ကြီး တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဒီ course သည် ဆက်သွယ်မှု ကွန်ရက် computer network ၏ အခြေခံကျသော သင်ခန်းစာ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Computer Networks ၏ အစိတ်အပိုင်းများ၊ တည်ဆောက်ပုံများ၊ အသုံးပြုသော tools များ နှင့် အခြေခံ principles and protocols များ အားလုံး ခြုံငုံ သုံးသပ်ထားသော သင်ခန်းစာ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ Network Engineer များ၏ လက်စွဲဖြစ်သော Cisco ကထုတ်တဲ့ packet tracer software နဲ့ network simulation များကို လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Teacher: Dr. May Zin Oo